🥇 ▷ Jailbreak loogu talagalay iPhones oo leh qalabka macruufka 12.4 ayaa horeyba u jiray ✅
Jailbreak loogu talagalay iPhones oo leh qalabka macruufka 12.4 ayaa horeyba u jiray
Apple ayaa mar kale dhibaatooyin ku qaba macruufka markii loo maleynayay in Jailbreak uu ahaa wax la soo dhaafay. Ka dib oo dhan, jabsade magaciisa la yiraahdo ‘Pwn20wnd’ ayaa bilaabay isniintii la soo dhaafay aaladdii ugu horreysey ee lagu soo qaado dhowr sano, oo awood u leh inuu ku shaqeeyo nooca ugu dambeeyay ee Nidaamka Howlgalka Microsoft. Apple.
UnC0ver Jailbreak wuxuu ku shaqeeyaa iPhones oo ay kujiraan A8 soosaarayaal (iPhone 6) ilaa A11 (iPhone X)
Waxa xiisaha lihi, jabinta ayaa suurta gal ka ahayd dib-ula-noqoshada sixitaanka Apple ee u nuglaanta la yaqaan. Marka la soo koobo, dhibaatada hadda albaabka u furaysa Jailbreak ayaa lagu hagaajiyay macruufka 12.3… Laakiin waxay ku soo noqotaa iOS 12.4.
Markaa haddii aad u dhacdo inaad jeceshahay inaad wax ka badasho taleefankaaga casriga ah, waxaad fursad weyn hadda ku haysataa iPhone-kaaga. Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay in heerarka amniga ee iPhone Jailbroken aysan wax xiriir ah la laheyn iPhone-ka oo leh barnaamij Apple ah ‘Apple’
Haddii aad xiiseyneyso mowduuca, waxaad soo dejisan kartaa Un0ver 3.5.2 halkan.
iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max? Siideynta Sebtember 10-keedii!
Markii la soosaaray iPhones-ka cusub ayaa soo dhowaanaya, hadaladii ugu horreeyay ee sheegayey ee ah in isbeddel la filayo in la sameeyo ayaa sidoo kale bilaabaya inay gaaraan internetka. Marka la soo koobo, waxay umuuqataa in sanadka 2019-ka aan arki doonno horudhaca ‘Pro’ ee telefannada casriga ah ee la siinayo Apple, taas oo dhacda inay qayb ka noqoto khadka tooska ah ee laptop iyo kiniiniyada.
Tani, marka loo eego liigitaan toos ah oo ka imanaya mid ka mid ah dadka sameeya kiisaska iPhone 11! Kaas oo weliba sii kashifaya in cabirka shaashadda uu la mid noqon doono
Markaa waxay umuuqataa in taleefannada casriga ah loo aqoonsan doono iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max
Xaqiiqdii macno badan ayaa leh caqli badan oo ka badan kan loo yaqaan ‘model model’ ee hadda jira ee Apple… XS iyo XR? Si dhab ah?